१ बर्ष किन काम गर्न चाहदैनन् अनमोल केसी ? « Mazzako Online
१ बर्ष किन काम गर्न चाहदैनन् अनमोल केसी ?
अभिनेता अनमोल केसीलाई अहिले लामो श्वास फेर्ने अवस्था छ । किनकी, कृ र क्याप्टेनमा प्रयोग गर्दा अनमोल केसीलाई दर्शकले जति रुचाए, त्यो उनको सोचाई भन्दा कम थियो । यही भएर पनि चैत्र २९ गतेबाट रिलिज भएको सिनेमा ए मेरो हजुर ३ उनका लागि विशेष थियो ।
तर, यो सिनेमाले बम्पर ओपनिङ मात्र होइन, सोमबार पनि दर्शकलाई गज्जबैले होल्ड गरेपछि अनमोल केसीका लागि ठूलो राहत मिलेको छ । सिनेमाले नेपालबाट लगानी उठाएर निर्मातालाई राम्रै मुनाफा दिने देखिएको छ । सिनेमाले मुनाफा कमाउने देखिएपछि अभिनेता अनमोल केसी अहिले फुरुङ्ग छन् ।
अभिनेता केसी अब १ बर्ष सिनेमा नखेल्ने मुडमा देखिएका छन् । लगातार क्याप्टेन र ए मेरो हजुर ३ मा काम गरेर थकित अभिनेताले आफूले अब केही समय विश्राम लिने पनि बताएका छन् । अभिनेता केसीका अनुसार, उनी निकै नै राम्रो कथाको खोजीमा छन् ।
तर, यसका लागि उनले करिब १ बर्ष पर्खिनेछन् । यसैले पनि अभिनेता केसीको यो बर्ष कुनै पनि सिनेमा रिलिज हुने छैन ।
कस्तो रह्यो माछा माछाको ओपनिङ